I-Slow Youtube? I-bandwidth enhle? (Yilungise) | Kusuka kuLinux
Ngaphambi kokuqala ngifuna ukusho ukuthi ngiyayithanda ngempela i-Blog Theme entsha nokuthi ikhula kanjani.
Manje, ukufika ephuzwini. Ngingomunye walabo ababhuloga laphaya nalaphaya. Ngibone isithangami ngezikhathi ezithile sigcwala abantu abathi ama-video we Youtube Ziyahamba kancane (ikakhulukazi eSpain ngifunde lezi zinto) yize isivinini sayo sokulanda kanye ne-bandwidth kukuhle.
Abaningi bathi ama-ISP abo avimba noma "ikepisi" Youtube ngakho-ke kusibiza kakhulu. Angifuni ukungena engxoxweni ngalokhu. Angazi noma kuyiqiniso noma cha. iphuzu ukuthi kuyacasula impela ukuthi umuntu kufanele alinde imizuzu eminingana ividiyo (hhayi nakwi-HD) ukuyilayisha futhi akwazi ukuyibona.
Abaningi bazamile ukuthi le nkinga ibangelwe yile nkinga DNS. Kepha kungakhathalekile ukuthi DNS umuntu anayo, isivinini sokulanda ngeke sishintshe lutho.
Nasi isisombululo esihle kunazo zonke engingasithola.
Ngikhuluma nge sawubona.org
Yize ngingazange ngiyizame ngoba ngokwami ​​anginayo le nkinga. Bathi kuyasebenza impela nokuthi ungabuka amavidiyo ngokushesha.
Ukuyihlola ungaya ekhasini eliyinhloko bese ukhetha i- I-Plug-in ngesiphequluli sakho osithandayo. Kukhona nokuyifaka ngqo kwiWindows noma kwi-MAC kepha ngifunde nokuthi azisebenzi kahle kanjalo.
Ngimema labo abanalolu hlobo lwenkinga ukuthi bazame ukubona ukuthi kunjani. Sethemba ukuthi bayasitshela ukuthi kuyabasebenzela yini noma cha.
Zama ngentando yakho
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-Slow Youtube? I-bandwidth enhle? (Lungisa)
Uxolo uma nginephutha, kepha ngokusobala i- "accelerator" ayitholakali njengesandiso se-firefox: http://hola.org/download.html?list=1 Kucacisa "ukuvimba kuphela". Ukuze usebenzise ukusebenza okuchazwe kokuthunyelwe, kuyadingeka (ngiyagcizelela, ngokusobala ngokwalokho engikuqonda kuleyo webhusayithi) ukusebenzisa windows: /
Yebo. Ngayifaka ku-Iceweasel yami ngaphandle kwezinkinga.
Yilungise futhi awuzange uyizame? Akukho ukuphawula.
Angikwazi ukukuhlola ngoba anginayo leyo nkinga. 😛
Mngani, uma ungakazami, ngikuthola kungukunganaki okukhulu ukuncoma umkhiqizo ngokungaboni. Ngenhlanhla, umkhiqizo awutholakali kwiLinux, futhi lokhu, ngokwazi kwami, kuyibhulogi yeLinux. Akukho okudlula lelo qiniso okuthunyelwe akunangqondo. Kepha iqiniso lokuthi udale okuthunyelwe ngaphandle kokuzama noma yini kubonakala ngathi alihloniphi abanye abafundi.
U-Israyeli uGalicia Perez kusho
Ngicabanga ukuthi kungasebenza futhi ukushintsha kusuka ku-flash kuye ku-HTML5 ku-YouTube, ngoba ngibonile ukuthi amavidiyo alayisha ngokushesha okukhulu kunakwimodi yeFlash.
Phendula u-Israyeli uGalicia Perez
Lokho kuyiqiniso, ngoba i-HTML5 isebenzisa inqubo ehlukile yokusakaza kune-flash. Okungenani ku-HTML5 ku-Linux isebenza ngokushesha kune-Windows.
Ngishintshile kepha akuwona wonke amavidiyo atholakalayo
ngalesi sandiso yebo (i-Chromium / Chrome): https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-plus/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb
ingasaphathwa eyokuthi Hola futhi iphula imikhawulo yesifunda ku-pandora, youtube, google play nakwamanye amasayithi
Iklayenti le-You Tube elinohlobo lwendabuko lweLinux (idebhu, i-rpm ne-tar.gz) ngaphandle kwezikhangiso, ngaphandle kwemingcele futhi ngaphandle kokufunda imibono ewubuwula. Isimangaliso.
Ngisebenzisa i-smtube ozoyizuma 🙂
ku-minitube ngokwesibonelo amavidiyo we-VEVO awabonwa ...
INaOH iyatholakala kwiFirefox, njengamanje ngisebenzisa iFirefox futhi ngiyifakile nje, ngisebenzisa i-ArchLinux futhi ayivumele ngiyifake ngaphandle kwezinkinga, engingakuboni ushintsho olukhulu ku-Speed ​​kodwa ngizoqhubeka nokuhlola ukubona ukuthi kanjani kuyasebenza
Yebo, angikaze ngithi kwakungeyona eyeFirefox, kepha leso sengezo ukuvulela ukufinyelela kumasayithi njengoba kusho u- [zergdev], okungenani lawo engangifakelwe wona, futhi ngokusho kwekhasi elicacisa i- «Unblocker kuphela» . Noma kunjalo, ukusebenza lokhu okuthunyelwe okukhulunywa ngakho, kubizwa ngokuthi hola.org njenge- "Sawubona Accelerator", njengoba ngangiqonda futhi njengoba ngivivinya, akutholakali kusandiso se-firefox.
Kuhle kakhulu, ngicabanga ukuthi okwenzayo ukunikeza i-pc yakho i-IP evela kwelinye izwe ukuze ikwazi ukusebenzisa iHulu, njll.
Ngizamile i-OpenNIC kepha umphumela uyefana. Ingqikithi yokuthi ngihlale ngisebenzisa i-TPB ukubuka uchungechunge oluthile lwe-anime ngokudonsa ngesiNgisi.
Le nkinga ibuye yenzeke nasePeru, ngoba kulezi zingxenye akukhona ku-YouTube kuphela, kepha nakumasayithi amaningi asebenzisa i-flash futhi asebenzise ukusakaza (ngaphandle kwe-shoutcast, isivinini sokudlala esinamanzi kakhulu futhi angikaze ngibone noma yikuphi ukuphazamiseka ).
Kimi, ukwehla kwenzeka kimi nsuku zonke ntambama / ebusuku, kepha kwenzeka kuphela ngokulanda (kufaka phakathi izibuyekezo zamaphakeji ne-Youtube), bengilokhu ngixhumana nabantu abaningana abenze inkonzo efanayo ye-inthanethi Into efanayo yenzeka kuwo wonke umuntu (ngaphandle kwe-OS, ngaphandle kweWindows kepha izibuyekezo kuphela, ngeYouTube kuyinkinga efanayo).
Futhi uke wazama i-OpenNIC? Kusebenzele izimangaliso kimi.
kuyahlekisa ukuthi uyayisho
Ayikho inguqulo yeLinux. Uma le bhulogi ibizwa ngokuthi yi-DESDELINUX angiboni ukuthi kungani ngifaka okuthile okungekho ku-Linux.
Eqinisweni, kumane kungukuvula umkhawulo wesifunda: /
Ngibeka nje ukubamba okukodwa, akuwona umthombo ovulekile. Angifuni ukungena kulayini wakho "wokuhlela" kepha uma ungewona umthombo ovulekile, futhi awutholakali ku-GNU / Linux ...
Kwenzeka kimi futhi kimi kucace bha ukuthi i-orange kufanele isolwe, ngezimpelasonto kusuka ngo-3 ntambama kuya ku-2 ekuseni, angiboni i-240 p ku-YouTube, kanti nge-orange kunezinkulungwane zabantu ukukhononda ku-adslzone ...
Phambilini ngishiye ukuphawula okungasaveli. Bengizama ukucacisa ukuthi le software ayiwona umthombo ovulekile futhi ayitholakali ku-GNU / Linux. Noma yimiphi imibono kulokho obekungenzeka ukuze ukuphawula kwami ​​kwangaphambilini kungabe kusavela?
Ngiye kuwebhu, ngathola ukuthi ngisebenzisa i-Chrome futhi yafakwa ngaphandle kwezinkinga. Kepha lapho ngizama ukungena ku-YouTube, leli khasi libonakale lingatholakali. Ngiyekise ukusebenza kwe-Hello futhi ngaphinde ngabona iwebhusayithi ye-Youtube. Ngigcine ngokususa i-plug-in. Akuzange kungisebenzele.
Ngayifaka ku-firefox kepha akubonakali njengesithonjana sohlelo lokusebenza, ngakho-ke angazi ukuthi iyasebenza noma cha,
Endabeni yami, uma kube nokwenyuka okuncane, yini edingekayo ukuze ividiyo igeleze ngokuphelele. Ngiye ngavivinya ukubuka amanye ama-trailer ku-HD, futhi, akukho neyodwa eyekile njengaphambi kokusebenzisa le plugin.
NgeVimeo ngibonile ukushelela okungcono.
Ngabe kwenzeka kunoma ngubani kini ukuthi uma uqhubekisela phambili noma ubuyisela emuva emuva ividiyo ye-YouTube kancane, iqala ukulayisha kusuka ekuqaleni ngaleso sikhathi.
Kuyacasula impela ngoba kwesinye isikhathi uma ividiyo ilayishwe ngokugcwele futhi ngifuna ukuyithuthukisela endaweni ethile iqala ukulayishwa futhi, nakho konke ebikade ikulayishile ngaphambili kulahlekile.
Angazi noma kuzoba yinkinga yini ku-GNU / Linux noma ukuthi ngabe isidlali esisha se-YouTube sisebenza kabi yini.
Inkinga yisidlali esisha se-Youtube ku-flash. Sebenzisa isidlali kangcono ku-HTML5.
Ngenzile. Omunye uya ekhasini
futhi uyavuma ukungena esikhathini sesivivinyo.
Kodwa-ke, akuwona wonke amavidiyo we-YouTube akwi-HTML5 okwamanje. Lapho ulayisha ividiyo umuntu angathola ngokuchofoza kuyo ngokulungile futhi abone okuvela kulayini wokugcina waleyo menyu yokuqukethwe.
Ngiyifakile ku-firefox 22 evela kuwebhu kepha ayisebenzi kimi, kukhona ongangisiza?
Akusebenzi iLinux. Ayikho inguqulo yeLinux. Ukuphela kwento yeLinux ukuvimba okuthiwa kukuvumela ukuthi ubuke amavidiyo ongeke uwabuke ezweni lakho. Yilokho okufakile.
Anginakho okunye engingabonga ngakho, lapha e-Uruguay ngangithole inkontileka engu-50mb futhi angikwazi ukweqa ngisho ne-480p ku-YouTube !!! (Ngiphelelwe yithemba, ngiyazi.) Njengoba ngikwelinye ipulatifomu, njengeNetflix njll, ngingajabulela i-4k kaningi ngangokunokwenzeka, imikhonzo, futhi ngiyabonga futhi.